ရုံးမှာ ဖုန်းအသုံးပြုဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားသင့်တဲ့ စည်းကမ်း(၇)ခု - For her Myanmar
လူတိုင်းနီးပါးဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်သလို လူမှုကွန်ရက်တွေလည်း အတော်လည်းကျယ်ပြန့်လာပြီဆိုတော့ ဖုန်းကိုလက်ထဲကမချချင်လောက်အောင် စွဲလမ်းတဲ့ရောဂါတွေလည်း ထူပြောလာပြီယောင်းရေ။ အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ဖုန်းပဲကိုင်နေတာပဲဆိုတဲ့ အမေ့ရဲ့ဆူသံလောက်နဲ့ ရပ်တန့်သွားပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့ ဆူရုံလောက်နဲ့ပြီးမသွားဘဲ ယောင်းတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ မျက်မုန်းကျိုးမှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးကြန့်ကြာတာတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းတို့ရုံးမှာဖုန်းအသုံးပြုဖို့အတွက် ဒီလိုကန့်သတ်ချက်လေးတွေ ထားသင့်ပါတယ်နော်။
(၁) အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုန်းမသုံးဖြစ်အောင်နေပါ။
ရုံးချိန်အတွင်းမှာတော့ အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီး သေချာလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဖုန်းမသုံးရ မနေနိုင်ရင်တောင် ထမင်းစားနားချိန်နဲ့ တခြားအနားရတဲ့အချိန်တွေမှာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းမြင်နေရလို့ သုံးမိမှာစိုးရင်လည်း ဖုန်းကိုအံဆွဲထဲထည့်ထားတာမျိုး၊ အိတ်ထဲမှာပဲ ထားခဲ့တာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။
(၂)ဖုန်းသံ ပိတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဖုန်းသံအကျယ်ကြီးမြည်လာတာက အလုပ်မှာအာရုံစိုက်နေတဲ့သူတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းအသံကိုပိတ်ထားတာ ၊ အသံတိုးထားတာ ၊ vibrate လုပ်ထားတာတွေ လုပ်ထားပေးပါ။
Related Article;ယောင်းက အလုပ်နဲ့ဘဝ ညီမျှတဲ့လူတစ်ယောက်လား ?
ဝင်လာသမျှဖုန်းတွေကို ထိုင်ပြောနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနော်။ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို နှောင့်ယှက်နေသလို ယောင်းတို့ရဲ့အထက်လူကြီးလည်း ကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ဖုန်းဝင်လာရင်လည်း အထက်လူကြီးကိုအသိပေးပြီး ပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အလုပ်နေရာမှာပဲ ဖုန်းနဲ့အကြောင်းစုံပြောနေဖို့ မသင့်တော်သလို ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စလည်းရှိနိုင်တာမို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်မယ့် နေရာမှာခဏလောက် သွားပြောလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Related Article;အလုပ်နဲ့ဘဝ အချိုးကျစေဖို့ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းချက်(၃) ချက်
သန့်စင်ခန်းထဲဖုန်းယူသွားပြီး အချိန်တွေဆွဲလို့ ဖုန်းသုံးနေတတ်တာကလည်း တစ်ခါထက် ပိုမလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။ ပထမတစ်ကြိမ်လောက်မှာသာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လို့ ဖြည့်တွေးပေးနိုင်ပေမဲ့ (၂)ကြိမ်လောက်ဆိုရင်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်ကွက်သွားမှာသေချာပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းထဲက ပိုးမွှားတွေကလည်း ဖုန်းမှာကပ်ပါလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ အနားပေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တောင် ယူမသွားတာအကောင်းဆုံးပါ။
ဖုန်းကိုအစည်းအဝေးခန်းထဲ သယ်သွားတာက အချက်အလက်တွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်တောင် ဖုန်းကိုငုံ့ကြည့်ပြီး စာတွေရိုက်နေတာက အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့စာမှတ်နေရင်း မက်ဆေ့ဝင်လာခဲ့ရင်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သေးတာမို့ မှတ်စရာရှိတာစာအုပ်နဲ့မှတ်ပြီး ဖုန်းမယူသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၇)Voice message တွေကို စပီကာဖွင့်ပြီး နားထောင်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
အသံဖိုင်တွေကို နားကြပ်မပါဘဲ အသံဖွင့်နားထောင်တာက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အရေးကြီးလို့ နားကြပ်မပါရင်တောင် အသံကိုယောင်းတို့ကြားနိုင်သလောက်ပဲ တိုးတိုးလေးဖွင့်ပြီး နားထောင်ပေးပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် စည်းကမ်းနဲ့နေတတ်တာက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို လေးစားရာကျသလို အလုပ်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်လည်း များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အဓိကနဲ့သာမညကို ခွဲခြားပြီး လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်မှုကို ရှေးရှုနိုင်ကြပါစေနော်။
References : thebalancecareers , glassdoor
လူတိုငျးနီးပါးဖုနျးကိုငျနိုငျတဲ့ခတျေကွီးဖွဈသလို လူမှုကှနျရကျတှလေညျး အတျောလညျးကယျြပွနျ့လာပွီဆိုတော့ ဖုနျးကိုလကျထဲကမခခြငျြလောကျအောငျ စှဲလမျးတဲ့ရောဂါတှလေညျး ထူပွောလာပွီယောငျးရေ။ အိမျမှာဆိုရငျတော့ ဖုနျးပဲကိုငျနတောပဲဆိုတဲ့ အမရေဲ့ဆူသံလောကျနဲ့ ရပျတနျ့သှားပမေဲ့ လုပျငနျးခှငျထဲမှာတော့ ဆူရုံလောကျနဲ့ပွီးမသှားဘဲ ယောငျးတို့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ မကျြမုနျးကြိုးမှုတှနေဲ့ လုပျငနျးနှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာတာတှအေထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးတို့ရုံးမှာဖုနျးအသုံးပွုဖို့အတှကျ ဒီလိုကနျ့သတျခကျြလေးတှေ ထားသငျ့ပါတယျနျော။
(၁) အတတျနိုငျဆုံး ဖုနျးမသုံးဖွဈအောငျနပေါ။
ရုံးခြိနျအတှငျးမှာတော့ အလုပျကိုအာရုံစိုကျပွီး သခြောလုပျသငျ့ပါတယျ။ ဖုနျးမသုံးရ မနနေိုငျရငျတောငျ ထမငျးစားနားခြိနျနဲ့ တခွားအနားရတဲ့အခြိနျတှမှောပဲ သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဖုနျးမွငျနရေလို့ သုံးမိမှာစိုးရငျလညျး ဖုနျးကိုအံဆှဲထဲထညျ့ထားတာမြိုး၊ အိတျထဲမှာပဲ ထားခဲ့တာမြိုးလုပျပွီးတော့ ထိနျးခြုပျလို့ရပါတယျ။
(၂)ဖုနျးသံ ပိတျထားဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ဖုနျးသံအကယျြကွီးမွညျလာတာက အလုပျမှာအာရုံစိုကျနတေဲ့သူတှကေို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးအသံကိုပိတျထားတာ ၊ အသံတိုးထားတာ ၊ vibrate လုပျထားတာတှေ လုပျထားပေးပါ။
Related Article;ယောငျးက အလုပျနဲ့ဘဝ ညီမြှတဲ့လူတဈယောကျလား ?
ဝငျလာသမြှဖုနျးတှကေို ထိုငျပွောနတောတော့မဟုတျသေးဘူးလနေျော။ အလုပျပတျဝနျးကငျြကို နှောငျ့ယှကျနသေလို ယောငျးတို့ရဲ့အထကျလူကွီးလညျး ကွိုကျမယျမထငျပါဘူး။ အရမျးအရေးကွီးတဲ့ဖုနျးဝငျလာရငျလညျး အထကျလူကွီးကိုအသိပေးပွီး ပွောတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
အလုပျနရောမှာပဲ ဖုနျးနဲ့အကွောငျးစုံပွောနဖေို့ မသငျ့တျောသလို ၊ ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စလညျးရှိနိုငျတာမို့ လှတျလှတျလပျလပျပွောနိုငျမယျ့ နရောမှာခဏလောကျ သှားပွောလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
Related Article;အလုပျနဲ့ဘဝ အခြိုးကစြဖေို့ မဖွဈမနေ လိုကျနာရမယျ့ စညျးကမျးခကျြ(၃) ခကျြ
သနျ့စငျခနျးထဲဖုနျးယူသှားပွီး အခြိနျတှဆှေဲလို့ ဖုနျးသုံးနတေတျတာကလညျး တဈခါထကျ ပိုမလုပျသငျ့တဲ့အရာပါ။ ပထမတဈကွိမျလောကျမှာသာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့လို့ ဖွညျ့တှေးပေးနိုငျပမေဲ့ (၂)ကွိမျလောကျဆိုရငျတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ စိတျကှကျသှားမှာသခြောပါတယျ။ သနျ့စငျခနျးထဲက ပိုးမှားတှကေလညျး ဖုနျးမှာကပျပါလာနိုငျသေးတယျဆိုတော့ အနားပေးတဲ့အခြိနျဆိုရငျတောငျ ယူမသှားတာအကောငျးဆုံးပါ။
ဖုနျးကိုအစညျးအဝေးခနျးထဲ သယျသှားတာက အခကျြအလကျတှမှေတျဖို့ဆိုရငျတောငျ ဖုနျးကိုငုံ့ကွညျ့ပွီး စာတှရေိုကျနတောက အပွနျအလှနျဆှေးနှေးမှုကို နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။ ဖုနျးနဲ့စာမှတျနရေငျး မကျဆဝေ့ငျလာခဲ့ရငျလညျး အနှောငျ့အယှကျဖွဈနိုငျသေးတာမို့ မှတျစရာရှိတာစာအုပျနဲ့မှတျပွီး ဖုနျးမယူသှားတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
(၇)Voice message တှကေို စပီကာဖှငျ့ပွီး နားထောငျတာတှေ မလုပျပါနဲ့။
အသံဖိုငျတှကေို နားကွပျမပါဘဲ အသံဖှငျ့နားထောငျတာက ဘေးပတျဝနျးကငျြကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။ အရေးကွီးလို့ နားကွပျမပါရငျတောငျ အသံကိုယောငျးတို့ကွားနိုငျသလောကျပဲ တိုးတိုးလေးဖှငျ့ပွီး နားထောငျပေးပါ။
လုပျငနျးခှငျမှာ ပတျဝနျးကငျြကိုအနှောငျ့အယှကျမဖွဈအောငျ စညျးကမျးနဲ့နတေတျတာက လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို လေးစားရာကသြလို အလုပျအောငျမွငျတိုးတကျဖို့အတှကျလညျး မြားစှာအထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ အဓိကနဲ့သာမညကို ခှဲခွားပွီး လုပျငနျးခှငျတိုးတကျမှုကို ရှေးရှုနိုငျကွပါစနေျော။
Tags: Away, Important Calls, Phone, private, ringtone, rules, Voicemail, work